China Matanho matatu emagetsi magetsi mita （kutakura, lora, gprs） vagadziri uye vatengesi | KUPonesa
Danho rimwechete rejanji simba mita meter kure）
Matatu-chikamu mana-waya / matatu-chikamu matatu-waya magetsi emamita anotora dunhu rakakura-rakabatanidzwa redunhu uye anoshandisa yakakwirira-yechokwadi simba yekuyera chip. Yayo yekutakura module yekutaurirana kugona uye kuvimbika zvakare yakasvika padanho rekushandisa rakakura. Iyo inogamuchira digital sampling processing tekinoroji uye SMT maitiro, uye inogadzirwa uye inogadzirwa maererano nemagetsi chaiwo ekushandisa evashandisi vemaindasitiri.
1. Flame inodzokera, nyore kuisa
2. Anoshanda & Reactive simba kuyerwa mabasa, anogona kuratidza nguva, alarm kodhi, nezvimwe.
3. Iine basa rekuvhura rekodhi rekodhi, inogona kubvunzwa kudzivirira kuba kwemagetsi.
4. Mamita emagetsi ane basa rekupamhidzira mutero (mutengo unoshanduka)
5. Remote uye yemunharaunda muripo wekudzora nzira
6.Communication nzira: RS485, infrared
7. Iyo ine basa rekuchenesa mamita, ayo ari nyore uye ari nyore kushandisa.
8.Iye inotakura wave inotaura kuburikidza neine waya yemagetsi netambo pasina kukosha kwekudhonza imwe waya.
1.Display ine LCD kuratidzwa ine upamhi hwekutarisa kona uye yakakwirira kusiyana
2.Apply dijiti yekugadziriswa tekinoroji uye SMT maitiro.
3.Voltage sampling loop inotora kupesana nekuparadzanisa voltage
4.The chikuru basa: kuyerwa uye kuonwa, kurebesa mutero kudzora, kuchengetedza chitupa uye encryption, kuratidza, chiitiko kurekodha, kusunungura, nguva, kurongedza kuburitsa, nezvimwe.
5.Manganese mhangura shunt uye NB module:
Iyo yazvino inogamuchira chiuno chine yakasimba kwazvo uye yakafara-mativi manganese mhangura shunt.
NB module: IoT networking yekutaurirana, mashoma kushandisa simba. Inotsigira yakakura-inoshanda kubatanidza kune zvishandiso zvine yakakwira network yekubatanidza zvinodiwa
6.Carrier module: Kutaurirana kuburikidza nemagetsi mutsara networking pasina kudiwa kwekuwedzera tambo.
Lora module: kureba-diki diki isina waya network network kutaura.
GPRS module: nhare yeruzhinji network (2G network).
7.Card kusarudzwa uye nzira yekutaurirana: CPU kadhi / logic encryption kadhi / SD kadhi. RS485, infrared, magetsi mutsara anotakura
8.Display ruzivo: yekuwedzera magetsi kushandiswa mukati memwedzi uno uye mwedzi wapfuura, inowedzera magetsi magetsi chiratidzo uye yakazara yakaunganidzwa yemagetsi sosi yekuratidzira kukosha, zuva razvino nenguva, alarm kodhi kana kukurumidza, mamiriro ehurukuro inomhanyisa, mita yemamita emagetsi emagetsi, etc.
9.Metering chip uye NB module: Iyo metering chip inoshandiswa kuyera bidirectional inoshanda simba uye ina-quadrant reactive simba. Iyo voltage sampling loop inotora kuramba kupesana kwemagetsi.
10.Optional basa- switch yakavakirwa-mukati
Inesarudzo yekusvika yakananga mhando kana shanduro yekushandura yekusarudza, sarudzo yekushandira-switch yakavakirwa-mukati
switch yakavakirwa-mukati: miniature yedunhu breaker switch inoiswa mukati memamita, uye metres yakabatanidzwa, zvakanakira: chimiro chiri nyore uye mutengo wakachipa.
11.Optional basa-chinja zvekunze
Inesarudzo yekusvika yakananga mhando kana shanduro yekushandura yemhando, sarudzo inoshanda- switch yekunze
chinja chekunze: miniature redunhu rakapatsanurwa rakaiswa parutivi, magetsi emagetsi anodzora kuvhura / kuvhara kweyekunze redunhu breaker kuburikidza nehutongi
zvakanakira: ekunze wedunhu anotsemura, kusimba zvinovhiringidza, kwete nyore kukuvadza.
Revhisi vhorumu 3 × 220 / 380V
Ratidziro iripo 3 × 1.5（6）A、 3 × 5（20）A、 3 × 10（40）A、 3 × 5（60）A、 3 × 20（80）A
Chikamu chechokwadi Active Level 0.5, Reactive Level 2, 0.5seconds / zuva
Simba rekushandisa Voltage mutsetse: <= 1.5W, 5VA; mutsara wepano: <1VA
Kupisa huwandu Kushanda tembiricha -25 ~ 55degree, kwakanyanya kushanda tembiricha huwandu -40 ~ 70 degree
Mamita Constant (imp / kWh) 6400、400、240
Kukurukurirana RS485: 2400bps Infrared: 1200bps DL / T645-2007
——Wire Kubatanidza Mode Modes——
Gadzira mamitha emagetsi kubhokisi remamita, uye sanganisa interface yacho zvichienderana neaya wiring. Inokurudzirwa kushandisa waya yemhangura kana terminal yendarira. Masikono ari muye bhokisi rechisimba anofanirwa kusimbiswa kuti asapisa nekuda kwekusangana kwakashata kana waya yakanyanya kuonda
Yepfuura: Imwe chikamu chemagetsi magetsi mita
Inotevera: Matanho matatu emagetsi simba mita
Matanho Matatu Dhijitari Yemagetsi Meter
Matatu Magetsi Meter
Matanho Matatu Energy Meter
Vatatu Chikamu Ic Kadhi Smart Prepaid Energy Meter
Matanho matatu Kwh Mamita
Matanho Matatu Smart Energy Meter